Nhau - Mashandiro anoita pavers
Kutakura pasi pamwe nezvinhu pasi peiyo yepamusoro mutoro wekutakura masosi, kambani yedu inotora yakanyanya kupfeka-isingagadzirike, inokonzeresa-kusagadzikana, yakasimba-yakasimba zvinhu, zvinotarisirwa kushanda kwenguva yakareba.
Dhizaini yekutakura backplane ndeyehungwaru hukuru. Mune mamwe mazwi, kuiswa kwayo hakudi screw, iyo inogona kuchengetedza yakawanda nguva. Nekushandisa musanganiswa weakanyanya kupfeka-asingagadzirise zvinhu uye yakakwirira-simba yekuendesa cheni, iyo nguva yebasa yemuchina inovimbiswa kuve yakareba zvakakwana. Kunze kwezvo, yekupfeka-isingagadziriswe chiwanikwa blade zvinhu zvinoshandiswa zvakare kuzadzisa iyo kubatana, kuwana zviri nyore kumisikidza uye zvakare kuwedzera hupenyu hwebasa.
Basa rayo kutamisa zvinhu kubva kune hopper kuenda kune zononoka chipande. Kukora kudiki kudiki kunopedzwa nekutenderera kwakatwasuka ukuru uye hwepakati-hukuru hwekupima ukobvu hunowanzo kuburikidza nekutsvedza uchikwira kutakura.
Pfungwa yekushanda yekutakura pasi paver inogona kutsanangurwa seiyi: Iyo cheni inotyaira yakatwasuka yekutsvedza kutsvedza pasi. Nekuunganidzwa kwezvinhu, iyo paver inotakura zvinhu kuburikidza negedhi, nokudaro ichigadzira kumwe kuyerera kwezvinhu zvekufambisa, izvo zvinoramba zvichikwira kumusoro kweye chipenga. Iwo akakosha mapoinzi ekugadzirwa kwekutakura sisitimu yepavhendi yekutsveta ndeaya anotevera: Chekutanga, kumhanya kwechikwenya kuchaverengerwa kusangana nezvinodiwa zvepaver kugadzirwa; Ipapo, simba rekutsvaira rinozochinja zvishoma nezvishoma kusvikira rasangana nezvinodiwa nepower simba. Naizvozvo, iyo paver inogona kushandurwa kuita yekufambisa inofamba uye inoshanda nemazvo.
Isu Xuzhou Chengzhi Kuvaka, semutengesi wezvipenga zvemuchina wekutakura wepasi, unopa akasiyana emuchina zvishongedzo, kusanganisira iyo backplane yepavha. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu, unogamuchirwa kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama. Isu takanangana nekupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekushandira vatengi kune kwavo kugutsikana. Kazhinji, isu tiri kutarisira zvepachokwadi kune kumwe-kwenguva refu bhizinesi mushandirapamwe uye isu tinonyatso ramba tichifambira mberi kuti tigadzire ramangwana rakawedzera.